Muxuu Dr Abi Axmed ka yiri kullankii Farmaajo iyo Uhuru? - BBC News Somali
Madaxda saddexda dal
Waa wax iska caadi ah in siyaabo kale duwan loo fasiro marka ay dowlad heshiis la gasho dowlad kale ama shirkad. Taasna kama duwana waxa hadda ka dhacaya Soomaaliya.
Waxaase jira waxyaabo dhawr ah oo soo jiiday dareenka dad badan oo ku saabsan heshiiska ay wada galeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Kenya Uhuru Kenyatta.
Xudduudda Soomaaliya iyo Kenya oo sannad ka dib weli xiran
Ra'isulwasaaraha Itoobiya oo goobjoog ka ahaa shirka labada madaxweyne, islamarkaasna u kala dab qaadayay ayaa soo saaray qoraal ku saabsan heshiiska, wuxuuna sheegay in laga wada hadlay wax uu ku tilmaamay 'Isha Khilaafka', taas oo siyaabo kala duwan loo fasirtay.
Balse aan ku horeyno qodobo kale oo arrintan ku saabsan.
Sharaxaadda Villa Soomaaliya
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay arrinta laga hadlay ay tahay kaliya xiriirka dublamaasiyadeed ee madmadoowga soo galay ee labada dal.
Intaas kagama harin, "Madaxweynayaashu kama wada hadal, lamana soo shay qaadin Kiiska Maxkamadda Caddaaladda Adduunka, Dowladda Soomaaliyana mawqifkeeda waa mid cad oo aan mugdi ku jirin" ayaa lagu yiri qoraal lasoo saaray.
Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa soo daabacay in Ra'isulwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo ah guddoomiyaha urur goboleedka IGAD uu doonayay in arrinta badda loola macaamilo si gaar ah oo ka madax banaan arrimaha kale, si aysan u saamaynin mashaariicda kale ee horumarineed ee socda. Sidaas darteedna uu doonayay in xiriirka dublamaasiyadeed la hagaajiyo, arrinta muranka dhulbadeedkana ay noqoto 'Budo Gaar u Tuman'.
Dr Abi ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa Twiiter-ka ku sheegay in laga wada hadlay wax uu ku tilmaamay "Isha khilaafka", taas oo ay dad badan u fasirteen in loola jeedo dacwadda maxkamadda caddaalada adduunka taala.
Fasiraad kale ayaa ah in "Isha Khilaafka" loola jeedo xaraashkii ay dowladda Kenya sheegtay in Soomaaliya ay London ku xaraashtay ceelal shidaal oo ku yaala biyaha lagu muransanyahay, taas oo balse ay si joogto ah u beenisay dowladda federaalka.
Balse war kan Dr Abiy ka faahfaahsan waxaa tabiyay taleefishinka qaranka Itoobiya oo safarka ku wehliyay Ra'isulwasaaraha, wuxuuna faafiyay in labada dal ay ka wada hadleen arrinka muranka badda. Inkasta oo wadahadalkaas uu wax kasta noqon karo, taleefishinkana uusan sheegin in ay jiraan wax la'isku afgartay iyo in kale.
Hase yeeshee wuxuu si toos ah u burinayaa hadalkii madaxtooyada Soomaaliya ee ahaa in aananba laga wada hadlin qadiyadda badda.
Aamusnaanta dowladda Kenya
Inkasta oo uu ahaa shir heer sare ah oo ay isugu yimaadeen madaxda saddexda dal ee dariska ah, haddane waxaa arrin qeyru caadi ahayd in aysan jirin wax saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen, taas oo ah wax aanan looga baranin kulamada madaxda heerkan ah.
Waxaa arrinta sii murjiyay dowladda Kenya oo 24 kadib heshiiska dhacay aanan hal weedh aanan ka oran, xitaa hal sadar oo lagu soo xariiqay baraha bulshada.
Kulankan kii ka horeeyay, Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa boggagiisa bulshada kusoo qoray xogta shirka.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa weli ku adkaysanaya in arrin badda ay dacwadeeda taalo maxkamadda caddaaladda adduunka, halkaasna lagu kala bixi doono, wax gorgortana aanan laga galaynin sida uu BBC-da u sheegay wasiiru dowladda arrimaha dibedda ee Soomaaliya
Geelle: Sababtan ayaa igu kaliftay inaan markii shanaad u tartama doorashada Jabuuti
TOOS Madaxweyne Deni oo sheegay in Shabaab xabsiga dhexe ee Boosaaso maxaabiis kala baxeen